Miisaanka saxda ah ee ragga: waa maxay iyo sida loo xisaabiyo? | Ragga Stylish
Maanta, waajibaadkayaga, howlaheenna joogtada ah iyo nolosheenna fadhida, miisaanka culus waa dhibaato saameysa in badan oo ka mid ah dadweynaha. Waxay kuxirantahay da'da, dhererka iyo dhaqdhaqaaqa jirka ee laga fuliyo halkaas miisaanka ku habboon ee nin. Waxaa jira kalkuleytar kaa caawin kara inaad ogaato, laakiin waa qiyaas. Qormadan waxaynu ku lafaguri doonaa dastuurka nin iyo waa maxay miisaanka ugu habboon iyadoo loo eegayo dhaqdhaqaaqa jireed ee qofku haysto iyo laxanka nolosha.
Ma rabtaa inaad ogaato waa maxay miisaanka ugu habboon ee nin leeyahay? Kaliya waa inaad aqriso si aad uhesho 🙂
1 Welwel iyo nafaqo
2 Dhiirigelin iyo su'aalo
3 Xisaabinta miisaanka ugu habboon ee nin
4 Talo si loo gaaro miisaanka ugu habboon ee nin
Welwel iyo nafaqo
Waxaan aad ula qabsanay bulshada xaqiiqda ah in dumarka ay yihiin kuwa daneeya waxbadan oo ku saabsan xogta dejisa cabirka. Si kastaba ha noqotee, rag badan ayaa sidoo kale si aamusnaan ah uga cabanaya mashquulkan miisaanka oo kordha. Waana midda nolosheena fadhida ee aan hoggaaminno iyo badeecadaha sida loo farsameeyay iyo kuwa sokorta leh ay aad u adag tahay in caafimaad la helo iyada oo aan lagu dhicin jirrabka macmacaanka iyo cuntada qashinka ah.
Markaan u baxno inaan wax ka iibsanno supermarket-ka waan arki karnaa taas cunto dheellitiran oo caafimaad leh ayaa ku dhammaata kharash ka badan kan qashinka ah. Alaabooyinka waa la baakadeeyay oo si heer sare ah loo shaqeeyay. Waxay ku daraan xaddi badan oo sonkor ah iyo dufan cufan cunto kasta. Dhammaan tan ayaa ugu dambeyntii saameyn ku leh koritaanka dufanka jirka iyo miisaanka oo kordha.
Ugu horreyntii inaad tixgeliso miisaanka fikradda, waa inaad isweydiisaa dhowr su'aalood. Waa lagama maarmaan in haddii aad miisaan culus leedahay aad rabto inaad lumiso. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah inaad sifiican maskaxdayda u dejiso hadafyada aad rabto mustaqbalka fog. Waxa ugu horeeya waa inaad ku bilowdaa adoo isweydiinaya: Maxaad u rabtaa inaad lumiso miisaankaaga? Haddii ay tahay su'aal caafimaad waa wax lama huraan ah, laakiin haddii ay tahay kaliya bilicsanaanta waa inaad la kulantaa qallafsanaanta yoolkaaga.
Miisaanka oo kaa yaraada ma sahlana iyo dhiirigelinta kugu hogaamineysa inaad rabto inaad sameyso waa inay kugu filnaataa inaad sii wadato dabinka xitaa waqtiyada xun. Waxaa jiri doona waqtiyo aad walwal qabtid inaad wax cuntid, kuwa kalena markaad quusato maxaa yeelay waad istaagi doontaa mana arki doontid horumarka jirkaaga. Waxaa jira dad badan oo bilaaba dhiirigelin aad u weyn si ay u fuliyaan cuntada iyo jimicsiga. Waxay aadaan jimicsiga maalin kasta 2 saacadood ama ka badan waxayna "is dilaan" si ay u jimicsadaan.
Dhiirigelin iyo su'aalo
Dhiirigelintu waa qodob aad muhiim ugu ah sii wadida tababarka maalinlaha ah. Miisaan dhimista ma aha inay ahaato waajib ama ku meel gaar. Waxay ahayd inay noqoto qaab nololeed. Waa inaad noqotaa qof caafimaad qaba oo had iyo jeer maskaxda ku haysa hadafka aad u go’aansatay inaad miisaanka iska dhimeyso.
Miisaanka ugu habboon ee ragga waxaa go'aamiya arrimo taxane ah. Si kastaba ha noqotee, indhaha qaawan waxaad ku ogaan kartaa xaaladda culeyska ninka. Qaddarka dufanka isku ururay, mugga jirka, qaabka jirka iyo qaab dhismeedka, iwm. Markaad go’aansato inaad miisaanka iska dhinto, waa inaad ogaataa sababta dhabta ah ee aad u doonayso inaad miisaankaaga u dhinto. Markaad ka fikirto, miisaan intee le'eg ayaad rabtaa inaad lumiso? Miisaanka aad rabto inaad gaarto wuxuu ku sugan yahay halka ugu sarreysa ee yoolkaaga safarka kugu qaadanaya inaad ku gaartana wuxuu noqon karaa mid dheer oo adag
Haddii aad kaliya lumisay waxoogaa rodol ah, dhib malahan, hal ama laba toddobaad gudahood, waad awoodi doontaa inaad mar kale lumiso. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad leh culeys ka sarreeya 100 kg, halka culeyskooda ugu habboon yahay 80 kg. Inaad lumiso 20 kg oo miisaan ah hab caafimaad ah ma aha hawl fudud hal ama laba toddobaad. Waa su’aal dulqaadka, mudada, adkeysiga iyo, wixii ka sarreeya, oo dhan.
Sidee ayaad ku heshay miisaankan? Isweydii waxa aad ku fashilanto maalintaada ilaa maanta. Maxay yihiin cunnooyinkaaga xun iyo qaab nololeedkaaga aan caafimaadka qabin. Diyaar ma u tahay inaad ballanqaaddo inaad gaarto miisaanka aad adigu dejisay?
Markii su’aalahan oo dhan la isweydiiyo, waxaa la joogaa xilligii ficil la samayn lahaa.
Xisaabinta miisaanka ugu habboon ee nin
Sidii aan horay u soo sheegnay, waqtigan xaadirka ah waxaa jira khilaafyo badan maxaa yeelay dadka si fiican looguma cabbiri karo xuduudaha xisaabta. Dabeecadda aadamuhu way ka duwan tahay shaqsi kasta waana in la go'aamiyaa barnaamijka ugu wanaagsan ee lagu waafajiyay baahida qof walba.
Waa inaad tixgelisaa dhinacyo badan oo shaqsiyeed si aad ula qabsatid cuntadaada milimitirka. Tani waa lagama maarmaan haddii aan dooneyno luminta miisaanka inay noqoto khibrad dhiirrigelin iyo qaboojin leh.
Waxa ugu horreeya ee laga fikiro waa gudaha tusmada jirka. Tani waa celceliska miisaankaaga iyo dhererkaaga. Kadibna waa in la xisaabiyaa boqolleyda dufanka jirka. Baruurta visceral waa waxa ku xeeran xubnaha gudaha. Tani waxay ku badan tahay ragga. Baruurta kale waa subcutaneous waana tan maqaarka hoostiisa ku jirta.
Marka xigta, waxaan sii wadnaa xisaabinta qadarka muruqyadar. Waxaa jira laba nooc oo muruq ah, muruqyada xubnaha gudaha iyo muruqa ku dhegsan lafaha una oggolaanaya dhaqdhaqaaqa jirkaaga. Waad ku kordhin kartaa jimicsi iyo hawlo kale.
Ugu dambeyntii, waa inaad xisaabisaa dheef-shiid kiimikaadka asalka ah. Waa xaddiga ugu yar ee kalooriyada loo baahan yahay si loo fuliyo howlaha maalinlaha ah.
Talo si loo gaaro miisaanka ugu habboon ee nin
Waxaa jira taxaneyaal talooyin jireed oo ku saleysan fikradaha cunnida caafimaadka leh: cun dhowr jeer maalintii, samee jimicsi jireed, is waraabi, yaree isticmaalka aalkolada iyo khamriga kiciya, dheellitirka isticmaalka macmacaanka, iyo kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waxaan rabaa inaan ku tuso kuwa runtii waxtar leh si loo gaaro ujeedada aad adigu dejisay.tan:
Hayso muuqaal farxad leh oo togan bilowga qorshaha. Waa inaad kicisaa oo aad naftaada dhiirrigelisaa ama aad ku tiirsataa dadka hareerahaaga ah.
Ka fikir maalin kasta sida aad u rabto jirkaaga inuu noqdo si uusan u waayin dhiirigelin.
Sawir dhig meesha aad runtii qurxoon tahay halka aad ka arki karto.
Hurdada ka hor, qor guulaha dhimista miisaanka ee aad sameysay. Muhiim ma aha in la waswaasiyo, laakiin waxay noqon kartaa dhiirrigelin wanaagsan. Ka fikir in ay jiraan maalmo aad waayi doonto waxyar iyo kuwa kale oo kaa sii badan. Waxa muhiimka ah waa natiijada ugu dambeysa iyo inaad si fiican u socoto.
Had iyo jeer xasuusnow himilada kuu horseedday inaad miisaankaaga dhinto.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad lumiso miisaanka oo aad ku guuleysato miisaankaaga wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Miisaan ku habboon nin
Nin qaab leh dijo
Fadlan dib u aqri wixii aad qortay oo ay ku dheehan tahay qaladaad higaada, mahadsanid.
Ku jawaab Nin qaab leh